izinhlelo zokunisela zasepulazini ezinhlobonhlobo
Ngoba izinhlelo zokunisela ziyingxenye ebalulekile yokulima kwanamuhla, kunezindlela eziningi ezahlukene zokunisela amapulazi ukwenza lokhu. Ngokufakwa okulungile, kungenzeka ukugcina amahektare angenamkhawulo wamasimu athela, noma ngabe zikude kunoma yimuphi umthombo wamanzi wamanzi noma uma imvula inganele. bangu 4 izinhlobo ezahlukene zezinhlelo zokunisela epulazini ze 1. Ukunisela Izikhukhula, 2. Ukunisela kwe-Sprinkler,3. I-Drip Irrigation,4. I-Micro Irrigation,namuhla sikhuluma ngokunkcenkceshela ngokudonsela amanzi ngesikhuxu kanye nokunisela ngenkasa
I-Drip irrigation ifaka ukusetshenziswa kwe-tubing encane ye-poly ububanzi nge-emitters futhi isetshenziselwa ukufaka amanzi endaweni encane ngqo endaweni yezimpande yesitshalo. Ama-emitter angafakwa kwi-tubing ngesandla ukunisela isihlahla noma isitshalo esithile. Kusetshenzisiwe futhi i-emitter tubing enama-Drip emitters afakiwe efektri esikhaleni esithile ukunciphisa izindleko zokufaka. Amasistimu we-Drip angafakwa ngaphezulu kwenhlabathi noma angangcwatshwa ukuze kuncishiswe ukulonakala kweshubhu. I-Drip tape uhlobo lokunisela okwenziwe ngokudonsela amanzi okufakwe kushubhu elincanyana kakhulu elithunyelwa ngamatshe noma kuma rolls. Ama-emitters ahlukaniswa kusuka 6 ukuze 12 amayintshi ahlukane. I-Drip tape ivame ukusetshenziselwa ukunisela izitshalo zemifino kanye nezingadi kodwa zingangcwatshwa ukunisela izitshalo ezifana nekotini noma ummbila.
Ukunisela nge-Sprinkler kungasetjenziselwa ukunisela amasimu ngobukhulu obukhulu, emthambekeni, noma ukwakheka. Okubalwe ngezansi yizindlela ezahlukahlukene zokufafaza ezisetshenziswa ezinhlelweni zokunisela zasemapulazini ukusabalalisa amanzi ngensimu.
Isandla Sokuhambisa Iphayiphu - Ama-Sprinklers anamathiselwe ekugcineni kwesigaba esingamamitha amathathu noma amashumi amane e-aluminium noma ipayipi le-PVC. La mapayipi afakwa ekugcineni ukuze aqede phansi umugqa noma ingxenye yensimu futhi abizwa ngokuthi yi-lateral. Ama-futureals ajwayelekile ahlukaniswe cishe amamitha angamashumi amane.
I-Solid Set - Ipayipi lePVC elingaphansi komhlaba elingaphansi lifakwa kuyo yonke insimu enama-risers ephuma kubo ngesifafaza i-fafaza phezulu. Izikhala phakathi kwezifafaza zingasukela emashumini amane kuya ngaphezu kwezinyawo eziyikhulu ngokuya ngosayizi nohlobo lwesifafaza elisetshenzisiwe.
Ama-Center Pivots noma ezinye izinhlelo zeMishini yokuhambisa Irrigation - Izikhiphi zendlela yokunisela zifakiwe kanye nomshini omiswe emithanjeni eqinile noma ye-hose. Imvamisa ifakwa ngenhla nje kwesivuno kodwa ifakwe eduze komhlabathi kwezinye izinhlelo zokunisela amapulazi.
I-Hose Reel noma i-Gun Sisitimu Sokuhamba - Isikhumuli esikhulu esisodwa sifakwa enqoleni ehlanganiswe ne-hose esondweni elikhudlwana. Inqola ixhumeke kugandaganda futhi idonswa phansi insimu yokusetha, ekuphepheni i-hose kusuka ngemuva. Lapho amanzi egobhoza ngohlelo, i-Sprayer isebenza futhi i-reel iyajika, ukuhambisa i-hose nokudonsa okufafaza inqola ngaphakathi.